ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းသတင်း အမှတ်စဉ်(၁၃/၂၀၁၉) (အားကောင်းသော ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းအခြေအနေ)
ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းသတင်း အမှတ်စဉ်(၁၃/၂၀၁၉) (အားကောင်းသော ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းအခြေအနေ) (၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်) (မြန်မာစံတော်ချိန်(၀၁:၀၀)နာရီအချိန်ထုတ်ပြန်ချက်) (က) အားကောင်းသော ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းအခြေအနေ (၁) ယနေ့မြန်မာစံတော်ချိန် (၀၀:၃၀)နာရီအချိန် တိုင်းထွာချက်များအရ ဘင်္ဂလားပင်လယ် အော်အရှေ့အလယ်ပိုင်းတွင် ဖြစ်ပေါ်နေသော အားကောင်းသော ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း (Severe Cyclonic Storm) “ဘာဘ်ဘယ်” (BULBUL)သည် မြောက်-အနောက်မြောက် ဘက်သို့ ရွေ့လျားခဲ့ပြီး၊ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်အလယ်ပိုင်းနှင့် ယင်းနှင့်ဆက် စပ်လျှက်ရှိသော ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အရှေ့အလယ်ပိုင်းသို့ ရောက်ရှိခဲ့ကာ အိန္ဒိယ နိုင်ငံ၊ ပါရာဒစ်ပ်မြို့(Paradip) (ဩရိဿ-Odisha)၏ တောင်-အရှေ့တောင်ဘက် ရေမိုင် (၂၅၅) မိုင်ခန့်၊ စာဂါကျွန်း(Sagar Islands) (အနောက်ဘင်္ဂလားပြည်နယ်-West Bengal) ၏ တောင်ဘက် ရေမိုင် …
ကျောင်းဆရာမဝတ်စုံဝတ်၍ ဟန်ဆောင်ကာ (၈)တန်း ကျောင်းသားတစ်ဦးအား ပါးစပ်ပိတ် ကားပေါ်တင်ရန် ကြံစည်မှု
ကျောင်းဆရာမဝတ်စုံဝတ်၍ ဟန်ဆောင်ကာ (၈)တန်း ကျောင်းသားတစ်ဦးအား ပါးစပ်ပိတ် ကားပေါ်တင်ရန် ကြံစည်မှု မိုးညှင်းမြို့နယ်တွင် ကျောင်းဆရာမဝတ်စုံဝတ်၍ ဟန်ဆောင်ကာ အဋ္ဌမတန်း ကျောင်းသားတစ်ဦးအား ပါးစပ်ပိတ် ကားပေါ်ဆွဲတင်ရန် ကြံစည်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရသည် …. ။ ကချင်ပြည်နယ် မိုးညှင်းမြို့နယ်တွင် နိုဝင်ဘာ ၄ ရက် မွန်းလွဲ ၁ နာရီက ကျောင်းဆရာမ ဝတ်စုံဝတ်၍ ဟန်ဆောင်ကာ အဋ္ဌမတန်း ကျောင်းသားတစ်ဦးအား ပါးစပ်ပိတ် ကားပေါ်ဆွဲတင်ရန် ကြံစည်မှု ဖြစ်ပွားကြောင်း မိုးညှင်းမြို့မရဲစခန်းမှ သိရသည် …. ။ မောင်—(၁၃ နှစ်) အဋ္ဌမတန်း အထက (၁) နတ်ကြီးကုန်း (ဗမာပိုင်း) ရပ်ကွက် မိုးညှင်းမြို့ နေထိုင်သူသည် နေအိမ်မှ ကျောင်းသို့လာစဉ် …
တစ်ပတ်စာ၇ရက်သားသမီးဟောစာတမ်း (7.11.2019 မှ 13.11.2019 အထိ)
တစ်ပတ်စာ၇ရက်သားသမီးဟောစာတမ်း (7.11.2019 မှ 13.11.2019 အထိ) 7.11.2019 မှ 13.11.2019 အထိ တစ်ပတ်စာ၇ရက်သားသမီးဟောစာတမ်း (1) တနင်္ဂနွေ ဒီကာလမှာ အလုပ်တွေ ပုံကျလာတတ်ပါတယ် … ။ အလုံးစုံ ရင်းနှီးမြုပ်နှံထားရတတ်ပါတယ် … ။ ငွေ၊အချိန်၊လုပ်အား တစ်ယောက်တည်း ကုန်းရုန်းလုပ်နေရတတ်ပါတယ် … ။ မြင့်သောရာထူးဖြင့် အလုပ်လုပ်နေရသော်လည်း ဖိအားတွေ နဲ့ရင်ဆိုင်ရတတ်ပါတယ် …. ။ လုပ်ငန်းတူပြိုင်ဘက်တွေက မိမိဖောက်သည်ကိုလုယူခြင်း ခံရတတ်ပါတယ် …. ။ အောက် လက်ငယ်သားတွေ၊ တပည့်တွေကြောင့် မိမိငွေအချီကြီးဝင်တတ်ပါတယ် …. ။ ငွေအဝင်နည်းခဲ့ရင်တောင်မှ အများ၏ အားကိုးခြင်းကိုခံရတတ်ပါတယ် …. မိတ်ဟောင်း ဆွေဟောင်းတွေဆီက ကောင်းစွာ …
သင့်ကို မြန်မြန်ရုပ်ရင့်သွားစေနိုင်တဲ့ နေ့စဉ် အလေ့အထ ( ၁၀ ) မျိုး သင့် ရုပ်ရည်က လက်ရှိအသက်ထက် ပိုရင့် နေသလား။ မျိုးရိုးဗီဇကြောင့် ရုပ်ရင့်တာအပြင် သင်နေ့စဉ်နေထိုင်စားသောက်မှု အလေ့အထ တချို့ကြောင့်လည်း မြန်မြန်ရုပ်ရင့်စေပါတယ်။ သင့်ကို ရုပ်ရင့်စေတဲ့ အလေ့အထတွေကို ပြောင်းလဲကြည့်ရအောင်ဗျာ (၁) အဆီမပါသည့် အစာ စားခြင်း အဆီမပါတဲ့ အစာတွေကိုပဲ စားနေရင် အသားအရေက အရွယ်မတိုင်ခင်အိုမင်းပြီး အရေးကြောင်း ထင်စေနိုင်ပါတယ်။ အိုမီဂါ ၃ ဖက်တီးအက်ဆစ်အဆီကို စားပေးရင် အသားအ ရေချောမွေ့ပြီး နူးညံ့ပျော့ပျောင်းစေပါတယ်။ အရေးကြောင်းကင်းဖို့ အိုမီဂါ ၃ ဖက်တီးအက် ဆစ်ပါတဲ့ ငါးအဆီ၊ အခွံမာသီး၊ အစေ့အဆန်တွေ ကိုစားပေးသင့်ပါတယ်။ …
အချိန် မနှောင်းခင်လေး ကျောက်ကပ်ကို ကြိုတင် ကာကွယ်ဖို့ ကျောက်ကပ် သန့်စင်ပေးမယ့် သဘာဝ အိမ်တွင်းဆေး ကျောက်ကပ် ကျန်းမာရေးက သိပ်ကို အရေးကြီး ပါတယ်။ ခန္တာကိုယ်အတွက် အရေးပါတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက် တစ်ချို့ကို ကျောက်ကပ်က ဆောင်ရွက် ပေးတာပါ။ ကျောက်ကပ်ဟာ သွေးတွေကို သန့်စင် ပေးနိုင်တဲ့ အရာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးနဲ့ မညီညွှတ်တဲ့ အစားအသောက် တွေဟာ ကျောက်ကပ် လုပ်ဆောင်ချက်ကို လျှော့ကျ စေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ခန္တာကိုယ် အတွင်းမှာ အဆိပ်အတောက် ဖြစ်စေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကျောက်ကပ်အတွင် ကျောက်တည်တာနဲ့ ကျောက်ကပ်ရောဂါ ဖြစ်စေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်လည်း ခန္တာကိုယ် အတွင်းက အဆိပ်အတောက်တွေ ဖယ်ရှားပေးဖို့ …
မျက်နှာလေးက ချစ်ဖို့ကောင်းပေမယ့် မယုံနိုင်စရာ ခန္ဓာကိုယ်ပုံစံကို ထုတ်ဖော်ပြလိုက်တဲ့ ဆရာဝန်မလေး
မျက်နှာလေးက ချစ်ဖို့ကောင်းပေမယ့် မယုံနိုင်စရာ ခန္ဓာကိုယ်ပုံစံကို ထုတ်ဖော်ပြလိုက်တဲ့ ဆရာဝန်မလေး ချစ်စဖွယ် မျက်နှာနဲ့ သေးသေးသွယ်သွယ် ခန္ဓာကိုယ်လေးကို ပိုင်ဆိုင် ထားတဲ့ မိန်းကလေး ချောချောလေးတွေကို ပရိသတ်ကြီး မြင်ဖူး ကြမယ် ထင်ပါတယ် … ။ တရုတ် နိုင်ငံက ယွမ်ဟီရုံလို့ ခေါ်တဲ့ မိန်းကလေး ကတော့ သာမန် မဟုတ်ပဲ တစ်မူ ထူးခြား သူလေးပါ ။ သူမမှာ ချစ်စဖွယ် မျက်နှာလေး အပြင် ထူးခြားတဲ့ ကိုယ်ကာယ အလှပါ ပိုင်ဆိုင်ထားတာကြောင့် လူမှု ကွန်ယက်ပေါ်မှာ နာမည် ကျော်ကြား နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် … ။ သူမဟာ အားကစား …
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နာမည်ကြီးမော်ဒယ်လ်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ သန္တာဗိုလ်ကိုတော့လူတော်တော်များများသိကြမှာပါ။အရပ်အမြင့်ကြီးနဲ့အမိုက်စားခန္ဓာကိုယ်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီး International Modelတွေရဲ့ အသွင်အပြင်မျိုးရှိသူတစ်ယောက်ပါ။သူဟာသရုပ်ဆောင်ချောရတနာရဲ့ညီမအရင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အနုပညာလောကထဲကလူတစ်ယောက်ဖြစ်သလို သရုပ်တောင်ကောင်းပြည့်နဲ့လည်း ချစ်သူတွေဖြစ်နေကြတာ(၇)နှစ်ကျော်ခဲ့ပါပြီ။ပရိသတ်တွေချစ်ခင်အားကျမှုခံရတဲ့ အနုပညာစုံတွဲလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။သန္တာဗိုလ်ကတော့ပရိသတ်တွေစိတ်ဝင်စားလေ့ရှိတဲ့ သူတို့အကြောင်းတွေထဲကတစ်ခုကိုတော့ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ သန္တာဗိုလ် ကတော့သူ့ရဲ့ဖေ့ဘွတ်ခ်အကောင့်မှာ “ရစ်တတ်လွန်းတဲ့ ကောင်မလေးကို ပိုချစ်ပါဒါကြောင့် ဘိုရစ်လို့ ခေါ်သည်” လို့ရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်။သူကိုယ်တိုင်အင်မတန်ရစ်တဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်ဆိုတာကို ပရိသတ်ကိုပြောပြခဲ့ပြီး ဒီလိုရစ်တတ်တာလေးကိုတော့ ချစ်သူကိုပိုချစ်စေလိုတဲ့ပုံပါပဲ။ရစ်တတ်တာလေးနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ ချစ်စနိုးနာမည်ဘိုရစ်ဆိုတာလေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ သန္တာဗိုလ် လေးလို ရစ်တတ်တဲ့သူလေးတွေရှိကြလားနော်..။ Source:ThandarBo,CRD-Cele Gabar UNICODE ခဈြသူကိုရဈတတျလှနျးတဲ့သူလေးဖွဈကွောငျးပွောပွလိုကျတဲ့ သန်တာဗိုလျ မွနျမာနိုငျငံရဲ့နာမညျကွီးမျောဒယျလျတဈယောကျဖွဈတဲ့ သန်တာဗိုလျကိုတော့လူတျောတျောမြားမြားသိကွမှာပါ။အရပျအမွငျ့ကွီးနဲ့အမိုကျစားခန်ဓာကိုယျကိုပိုငျဆိုငျထားပွီး International Modelတှရေဲ့ အသှငျအပွငျမြိုးရှိသူတဈယောကျပါ။သူဟာသရုပျဆောငျခြောရတနာရဲ့ညီမအရငျးလညျးဖွဈပါတယျ။ အနုပညာလောကထဲကလူတဈယောကျဖွဈသလို သရုပျတောငျကောငျးပွညျ့နဲ့လညျး ခဈြသူတှဖွေဈနကွေတာ(၇)နှဈကြျောခဲ့ပါပွီ။ပရိသတျတှခေဈြခငျအားကမြှုခံရတဲ့ အနုပညာစုံတှဲလေးလညျးဖွဈပါတယျ။သန်တာဗိုလျကတော့ပရိသတျတှစေိတျဝငျစားလရှေိ့တဲ့ သူတို့အကွောငျးတှထေဲကတဈခုကိုတော့ပွောပွခဲ့ပါတယျ။ သန်တာဗိုလျ ကတော့သူ့ရဲ့ဖဘှေ့တျချအကောငျ့မှာ “ရဈတတျလှနျးတဲ့ ကောငျမလေးကို ပိုခဈြပါဒါကွောငျ့ ဘိုရဈလို့ ချေါသညျ” လို့ရေးသားထားတာဖွဈပါတယျ။သူကိုယျတိုငျအငျမတနျရဈတဲ့ကောငျမလေးတဈယောကျဆိုတာကို ပရိသတျကိုပွောပွခဲ့ပွီး ဒီလိုရဈတတျတာလေးကိုတော့ …
This Month : 33836
This Year : 205062
Total Users : 500195
Total views : 2069742